Ngano yaApollo | Absolut Kufamba
Isabel | 16/04/2021 11:27 | Yakagadziridzwa ku 16/04/2021 12:27 | Greece
Imwe yenyaya dzakakosha kwazvo dzepasirose nyika yaive yaApollo, yaive yemwari murwi aive muimbi panguva imwe chete nekuti aiperekedzwa nemasis uye aive mudziviriri mukuru wenhetembo nemumhanzi. Ndiye mumwe wevanamwari vanoremekedzwa vekare Girisi uye mumwe weanonyanya kushanduka.
Kana iwe uchifarira ngano dzechiGiriki, haugone kupotsa inotevera positi apo isu ticha bvunza nezve chimiro chaPhoebus (maRoma aiziva sei mwari uyu), kukosha kwenyaya yaApollo, mavambo ake, basa rake uye mhuri yake, pakati pezvimwe zvinhu.
1 Apollo aive ani?
2 Apollo anomiririrwa sei?
3 Ndezvipi zvipo zvemwari Apollo?
3.1 Apollo uye clairvoyance
3.2 Apollo uye mazwi
3.3 Apollo uye iyo Trojan Hondo
4 Mhuri yaApollo
Apollo aive ani?
Zvinoenderana nengano dzechiGiriki Apollo aive mwanakomana waZeus, mwari ane simba kwazvo weOlympus, naLeto, mwanasikana we titan ainamatwa samwarikadzi weusiku uye masikati masikati zvakasiyana.
Zeus pakutanga aifarira Asteria, aive hanzvadzi yaLeto, uye akaedza kumutora nechisimba. Nekudaro, iye akakwanisa kupukunyuka akachinja kuita zvihuta asi sezvo humwari uhu hwakaramba huchimushungurudza, akazopedzisira azvikanda mugungwa ndokushandurwa kuita chitsuwa cheOrtigia.
Asinga zadzise chinangwa chake, Zeus akabva aisa meso ake kuna Leto uyo akadzorera uye kubva pahukama ihwohwo akava nepamuviri naApollo nemapatya ake Atemisi. Nekudaro, mukadzi chaiye waZeus, Hera, paakanzwa nezvezvinoitika zvemurume wake, akatanga kutambudza kwakaipisisa kunaLeto kusvika pakutsvaga rubatsiro rwemwanasikana wake Eileithyia, mwarikadzi wekuzvarwa, kudzivirira kuberekwa kwetitanid.
Ndicho chikonzero ichi kuti, maererano nengano, Leto airwadziwa nemarwadzo ekubereka kwemazuva mapfumbamwe asi nekutenda kupindira kwevamwe vanamwari vakanzwira tsitsi Leto, kuberekwa kwaAtemisi kwakatenderwa uye akakurumidza kuve mukuru kuna amai vake. nekutakura kwehama yake Apollo. Uye saka zvakaitika. Nekudaro, Artemis akafadzwa nekutambura kwamai vake zvekuti akasarudza kuramba ari mhandara zvachose.
Asi chiitiko hachina kugumira ipapo. Asina kuzadzisa chinangwa chake, Hera akaedzazve kubvisa Leto nevana vake nekutumira shato kuti ivauraye. Zvakare, ivo vamwari vakanzwira tsitsi mugumo waLeto uye vakaita kuti Apollo akure mumazuva mana chete kuti auraye chikara chiuru chemiseve.
Sezvo iyo nyoka yaive mhuka yeumwari, Apollo aifanira kuita chirango chekuiuraya uye apo python yakawira pasi, Oracle yeDelphi yakavakwa. Mwanakomana waZeus akazova mutsigiri wenzvimbo ino, kuti gare gare vazeveze fungidziro munzeve dzevaporofita kana mapyasi.
Asi kuvengana kwaHera naLeto hakuna kugumira pano asi ngano yaApollo inorondedzera kuti Atemisi naiye aifanira kuramba vari vadziviriri veamai vavo nekusingaperi, nekuti Hera haana kumbomira kumutambudza. Semuenzaniso, maererano nengano dzechiGiriki, mapatya akauraya vanakomana gumi nemana vaNíobe, avo vakaseka titan isingafadzi, uye hofori Titius, uyo aida kumumanikidza.
Apollo anomiririrwa sei?
Aityiwa nevamwe vamwari uye vabereki vake chete ndivo vaigona kumutakura. Iye anomiririrwa semurume akanaka, asina ndebvu jaya rine musoro wake wakashongedzwa newaurel wreath uye mumaoko ake akabata zither kana lyre yaakapihwa naHermes. nenzira yekukumbira ruregerero kuba chikamu chemombe dzaApollo. Paakatanga kuridza chiridzwa, mwanakomana waZeus akashamisika nekuve anoyemura mimhanzi uye vakave shamwari huru.
Apollo anomiririrwa zvakare akatasva ngoro yegoridhe yeZuva iyo ina dzakaisvonaka mabhiza dzaidhonza kuyambuka denga. Nechikonzero ichi, anoonekwawo semwari wechiedza, Helios ari mwari weZuva. Zvisinei, mune dzimwe nguva dzakaitika vanamwari vaviri vanozivikanwa mune mumwe, Apollo.
Ndezvipi zvipo zvemwari Apollo?
Apollo anowanzo rondedzerwa samwari wehunyanzvi, mimhanzi, uye nhetembo.
Uyewo mitambo, uta nemiseve.
Ndiye mwari wekukurumidza kufa, chirwere nematambudziko asiwo mwari wekuporesa uye kudzivirira kubva kumasimba akaipa.
Apollo inozivikanwa nechiedza chechokwadi, chikonzero, kukwana uye kuwirirana.
Ndiye mudziviriri wevafudzi nemapoka, vafambisi vengarava nevapfuri.
Apollo uye clairvoyance
Zvinoenderana nengano yaApollo, mwari uyu aive nesimba rekutumira chipo chekujekesa kune vamwe uye izvi zvakaitika kuna Cassandra, mupristakadzi wake uye mwanasikana waPriam King weTroy, uyo waakapa chipo chechiporofita mukutsinhana kusangana panyama. Nekudaro, paakakwidziridzwa kune fakitori iyi, mukadzi wechidiki akaramba rudo rwamwari uye iye, achinzwa kubhinywa, akamutuka, zvichikonzera kuti chero munhu ambotenda zvirevo zvake.
Ndokusaka Cassandra paakada kuyambira nezvekuwa kwaTroy, fungidziro dzake hadzina kutorwa zvakanyanya uye guta rakaparadzwa.
Apollo uye mazwi
Zvinoenderana nengano dzechinyakare, Apollo aivewo nezvipo zvekuuka, achizarura kuvanhu zvirevo zveramangwana. uye chirevo chake kuDelphi (kwaakauraya nyoka nyoka) chakakosha kwazvo kuGirisi yese. Oracle yeDelphi yaive munzvimbo yechitendero pazasi peGomo reParnassus uye maGreek vakaenda kutemberi yamwari Apollo kunodzidza nezveramangwana rake kubva pamuromo waPythia, mupristakadzi aitaura zvakananga namwari uyu.
Apollo uye iyo Trojan Hondo
Ngano yaApollo inotaura kuti Poseidon, mwari wemakungwa, akamutuma kunovaka masvingo akapoterera guta reTroy kuridzivirira kubva kuvavengi. Mambo weTroy paakange asingade kubhadhara vanamwari, Apollo akatsiva nekutumira denda rinouraya kuguta.
Gare gare, Apollo akapindira muHondo yeTrojan kunyangwe hazvo chokwadi kuti pakutanga Zeus aive abvunza vanamwari kusarerekera muhondo. Zvisinei, vakapedzisira vatora chikamu mazviri. Semuenzaniso, Apollo naAphrodite vakagutsikana Ares kuti varwe kudivi reTrojan sezvo vaviri vevanakomana vaApollo, Hector naTroilus, vaive chikamu chedivi reTrojan.
Uyewo, Apollo akabatsira Paris kuuraya Achilles, ari iye akatungamira museve weTrojan muchinda kune iyo chete isina kusimba gamba reGreek: chitsitsinho. Akaponesa zvakare Enea kubva kurufu pamaoko aDiomedes.
Apollo aive nevazhinji, vazhinji vavakaroorana navo uye nevana. Kuva mwari werunako aive nevarume nevakadzi vadikani.
Vanoda murume vake vaive:
Kune rimwe divi, aive nevazhinji vakadzi vakadzi vaaive navo nevana.
Naiye Muse Talía aive neCoribantes
NaDríope kuna Anfiso
NaCreusa akabereka Ion
NaDeyone aive neMireto
NaCoronis kuenda Asclepius
Naiye nymph Kurini akabereka Areisteo
Na Ftía akabata pamuviri Doro
NaQione aive neFilamón
NaPsámate akabereka Lino
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Ngano yaApollo